Indonesia in Focus: Meelaha Interesting ee Indonesia
Meelaha Interesting ee Indonesia
Bali waa mid ka mid ah jasiiradda sixir ee Indonesia. Sida ay u badan tahay jasiiradda caanka ah ee Indonesia, Bali daryaa muuqaal cajiib ah buur iyo xeebaha quruxda badan dadka u kulul iyo saaxiibtinimo, dhaqanka firfircoon iyo bixiyo jiga ee ugu fiican dunida.
Safarka Leisure & Magazine ayaa loogu magac daray Bali si Adduunka ee Island Best ee 2009, halka Planet kelida ah siiyey horyaalka labaad Best of Travel 2010 kaalinta labaad ee adduunka ugu Bali
Maciin qurux badan oo bixiya wanaagsan. Inta badan hotel-ka ku sugnaa meel u dhow xeebta. Haddii aan, caadi ahaan waxay leeyihiin kaalinta gaarka ah u gaar ah ee xeebta gaar ah. Waxaad ka heli kartaa si fudud meelo ay ka mid yihiin Kuta ama Sanur.
Haddii aad ku sugan tahay taagga xasilloon sida Ubud, illoobi hotel shan-star ah. Waxaad halkaas u joogaan in ay qaataan jawiga. Kaliya dooro mid ka mid ah oo dhammi waxa u yar
Xusuusnow in aad "jirridda" geeska markii socda agagaarka gooladaha wadooyinka buurta sababtoo ah waa mid caadi ah in la wado dhexe ee wadada halkan. Waxaa jira dad badan wadooyinka hal-socodkii Bali. Haddii aad seegto jeedin badan laga yaabaa in aad baabuur waddo quruxsan ilaa hadda ka hor ku celin kartaa. Digniin!
Waxaan si adag ugu talinaynaa in aad buuxisid mid ka mid ah xarumaha badan oo gaaska ay dawladdu leedahay. In meelaha durugsan ee Bali
Waxaa jira kumanaan giftshops ee Bali. Meel aad u tagto, ka Denpasar in Ubud, waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo ay guriga geeyaan. Isku day gujinaya ah "Search Store" badhanka midig ee hoose haddii aad u baahan tahay wax tusisa.
Waxaa jira qaabab badan oo ka mid ah gaadiidka ay kaaga caawiyaan inaad hesho xeeran ee Bali. Kala duwan kala bar maalin wanaagsan, maalin buuxda oo booqasho habeen baakadaha waxaa laga heli karaa miiska hotel ama mid ka mid ah dad badan oo wakiilada socdaalka iyo Hawlwadeenada dalxiiska ayaa laga gooynayaa ee Bali. Ama baabuur oo darawal oo sidoo kale u shaqeyn doonaa sida aad tilmaan aad ka heli karto.
Inkasta oo socda, waxaad la weeraray doona su'aasha joogto ah "Transport,
Iyada oo tirada sii kordhaysa ee duulimaadyada tooska ah ee meelo badan oo dunida ah, ilaa Bali fudayd. Duulimaadyada ka Jakarta in Bali qaado oo ku saabsan 1.5 saacadood, ka Singapore iyo Perth (Australia) oo ku saabsan 2.5 iyo 3 saacadood, ka Hong Kong oo ku saabsan 4.5 saacadood, iyo Sydney / Melbourne ku saabsan 5,5-6 saacadood ee ka shaqeeya dad badan oo heer qaran iyo heer caalami ah.
Hubi in aad eegto "Denpasar (DPS)" halkii "B
Sida cuntada inta kale ee cuntada caadiga ah Indonesia, Bali waa bariis, waxay u adeegeen hawl yar oo basbaaska leh, khudaarta basbaaska leh, kaluun ama hilib iyo had iyo jeer u adeegeen la sambal ama xanjo magaalada Denver. Bali yihiin meelaha qaarkood ee Indonesia yihiin inta badan dadka aan Muslimiinta ahayn, si bolsters doofaarka ama lagu dubay waa qaas ah, sida duck betutu, sigaar cabbin caruusada duck ku duudduubay baasaboorka
Xeebaha White ee Bali waa jecel yahay, waayo, fasaxyada qoyska. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ciyaaraha biyaha waa laga helaa, sida doon muuska, parasailing ama jet barafka, dabaasha ama marna laga Cad ah. Doonyaha si ay gasiirado ku wareegsan loo qaadan karaa halkan ka iyo gujis beryahan si uu u daawado nolosha kulaylaha quuska ka compartments ammaan ah gudahood.
Waxaa ugu dhexdooda Bali caanka ah
15 Meelaha ee Bali oo qasab booqday
anekatempatwisata.com »Dalxiiska Indonesia» 15 Places in Bali oo qasab booqday
Sida qoraalkan? Share Yuk! Share on FacebookTweet oo arrintan ku saabsan on TwitterShare on Google + Pin on PinterestShare on LinkedIn
Waxay ku taallaa bari ee Java, Indonesia Bali waa in uu leeyahay dalxiiska fiican caanka ah adduunka oo dhan. Ka sokow si fiican u yaqaan for quruxdiisa dabiiciga ah, gaar ahaan xeebaha ay, Bali sidoo kale waxay caan ku tahay farshaxanka iyo dhaqanka waa mid gaar ah oo xiiso leh.
Bali sidii goob dalxiis dhamaystiran oo lagu daray ayaa indhaha badan oo xiiso leh a, meel kasta oo Bali oo waa in la booqday?
Kuta Beach waa meel dalxiis ee Bali ee ugu caansan uguna soo booqday by dalxiisayaal ah sababta oo ah meel u dhow garoonka diyaaradaha, xeebaha quruxda badan, kharash yar, iyo hirarka waa fiican ee surfers inuusan ahaan. Xeebta Kuta sidoo kale waxay caan ku tahay in ay qorraxda dusha laga taago aad u qurux badan. Xaqiiqooyinka gaarka ah ee Kuta Beach Kuta Beach waa ka hor inta noqday kaalinta dalxiis ee Bali ay tahay in la booqday, sida hadda, Kuta Beach waa dekedda weyn, oo ah xarun ganacsi ee Bali. Iyada oo ciid cad iyo badda buluug, lagu qalabeeyey ah goobaha aad u dhameystiran taageeraya, waa dalxiis Ra'iisul garto Kuta Beach Bali.
2. Pura Tanah Luudh
Pura Tanah Luudh waa mid ka mid ah meelo dalxiiska ee Bali oo caan ku quruxdiisa for, gaar ahaan qorrax dhaca. Pura Tanah Luudh oo ka kooban 2 gogo 'oo macbudka inuu yahay macbudka u Sujuudi oo ah ilaahii reer badda. Yadiisa ee Pura Tanah Luudh waa macbudka waxa uu ku yaalaa on top dhagax weyn on Abaalamrintaan. Waqtiga hir sare, aadan heli karin u dhaw in ay Tanah Pura Luud asked agagaarka dhagaxii weynaa oo badda Tanah Luudh la daadadku doonaa. Ugu hir yar yahay waxaad ka arki kartaa qaar ka mid ah mas badda kari waayay in sida ay dadka deegaanka ay tahay ilaalada Pura Tanah Luudh. Waxaa intaa dheer, in meel aawadeed waxaad u qaban karto Mas xurmada docile iyo eed la'aataan.
Xeebta Padang Padang waxaa laga yaabaa in ka yar si fiican u yaqaan badan xeebta ku caan Kuta, laakiin xeebta Padang Padang Beach waa mid aad u qurux badan oo u gaar ah. Isla mar waxaan hore u yimid Padang Padang Beach Waxaan sidoo kale qabaa in xeebta ay tani tahay xeebta aan soo jiidasho leh, sababtoo ah waa ka yar si fiican u yaqaan, laakiin sida muuqata aan qalad ahaa. Xeebta Padang Padang waa xeebta yar qarsoon ka dambeeya gabiga ah in meesha ay wax ka Pecatu, u dhow Uluwatu. Si aad u awoodo in ay gaaraan Padang Padang Beach, waa in aad ku dhex mareen jaranjarada ah in qaybiyaa gabiga. Xeebta Padang Padang ma yahay mid weyn oo ballaadhan, laakiin aad u qurux badan oo xiiso leh meel in ay soo booqdaan. Kooxda martida ah intooda badan Padang Padang Beach yihiin dalxiisayaal ajaanib ah sida Padang Padang Beach yar ka mid ah dalxiisayaasha dalka caanka ah.
Bedugul Bratan Lake waa u gudubno, a oo ku taala meel buuraley ah oo leh jawi dabiici ah oo qurux badan. Yadiisa ee Lake Bratan Bedugul waa jiritaanka macbudka la odhan jiray Ulun Danu. Ulun Danu Beratan ku yaalla geesta ah Lake Bedugul oo waa mid ka mid ah jiidashada ugu weyn ee Lake Bratan Bedugul. Intaa waxaa dheer, sidoo kale dalxiisayaal ku raaxaysan karaan kulan oo biyo ah oo ay jeexjeexday doon on Lake Bratan Bedugul.
Garuda Wisnu Kencana, ama caadi ahaan loo soo gaabiyo GWK dalxiiska dhaqanka waa beerta ku yaal Koonfurta Bali. Garuda Wisnu Kencana waa farshaxan shuqullada weyn ee I Nyoman Nuarta. Currently, taalada Garuda Wisnu Kencana wali si buuxda oo dhameystiran, qaar ka mid ah oo kaliya kuwaas oo la dhamaystiro, laakiin waa inaad sidaas oo weli ku raaxaysan karaan Muuqda ee Wisnu Garuda ka Kencana. Intaa waxaa dheer in taalada, waxa kale oo aad ka arki kartaa quruxda buuraha leh nuuradda ah la jaro galay blocks badan oo nuuradda. Blocks nuuradda Kuwaas waxaa ka buuxsami doona farshaxan. Intaa waxaa dheer in Wisnu Garuda ka Kencana ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah xaga masraxa fananka, aad ku raaxaysan karaan noocyada kala duwan ee qoob ka ciyaarka iyo farshaxanka Balinese ee tiyaatarka maalin walba.
Lovina xeebta ma laga yaabaa in lagu sidoo kale marar badan ka mid ah dalxiisayaasha maqlay. Lovina Beach waa mid ka mid ah meelo dalxiiska ee Bali waa jecel yahay, maxaa yeelay, Lovina waxaan ka arki karnaa hoonbarrooyinka dabaasha oo u boodaya in ay Habitat dabiiciga ah. Ku yaalla Waqooyiga Bali dhow Singaraja City, waxaad hor mari doontaa badda, oo wuxuu arkay hoonbarrooyinka isticmaalaya doonyo kalluumaysi. Lovina Beach Dolphins ciyaaro xeebta ee aroortii, sidaas darteed, inta badan dalxiisayaal ka fogaadaan xeebaha laga bilaabo 6 subaxnimo.
Macbudka Besakih inuu yahay macbudka ku yaal cagta ee Mount Agung, iyo inuu yahay macbudka ugu weyn ee Bali. The xafladaha diinta Pura Besakih Hindu waxaa inta badan lagu qabto sida Besakih la rumeysan yahay inay meel muqadas ah oo waa hooyadii oo dhan macbudyo ee Bali. Besakih la dhisay la fikirka ah dheelitirka Ilaah, nin, iyo nooca ama badanaa loo yaqaan Hita Tri ka Karana. Si aad u noqoto inay galaan aagga Besakih awoodin, waa in aad u gashada in amaahan kartaa in u dhow ee Besakih.
Pura Uluwatu waa mid ka mid ah meelo dalxiiska ee Bali taas oo kor ku xusan gabiga ah Hidiya badda. Uluwatu macbudka ma aha oo kaliya bixiyaa jawi diinta Balinese, laakiin sidoo kale waxay bixisaa Panorama qurux, gaar ahaan Quruxdii qorraxdu soo taago mar horeba si fiican u yaqaan. Macbudka Uluwatu ayaa aad la kulmi doonaa qaar ka mid ah daayeer in la rumeysan yahay in ay ka shaqeeyaan ilaalinta karaamada ee Uluwatu. Si aad u soo galaan aagga of Uluwatu, waa in aad isticmaasho gashi iyo safaleeti in uu yahay calaamad ixtiraam xurmada ee Uluwatu.
Jimbaran Beach waa mid ka mid ah meelo dalxiiska ee Bali ee ugu caansan ee. Markii waxaad u timid inaad Jimbaran Beach, markii ugu horeysay ee aad arki doontaa waa saf ah miisaska iyo kuraasta carrada ka dul cad u qurux badan. Xeebta Jimbaran waxay caan ku tahay in ay ku laayeen Kuliyadda ee xeebta, gaar ahaan suxuunta badda. Xeebta Jimbaran kuwa idinka mid ah oo doonaya in ay u safraan xeebta halka riyaaqayaa safar Kuliyadda Balinese. Looma baahna in la walwalo cunista ee Jimbaran Beach, maxaa yeelay, hirarka badda ee Jimbaran Beach waa mid aad u xasilloon, ma wiiqi kuwa idinka mid ah oo wax cunayeen xeebta.
Sangeh waa meel dalxiis ee Bali in aad ku soo dejin doonaa mid la dabiiciga ah. Waxay ku taallaa Ubud, Bali, Sangeh uu duud yahay deggan daayeer badan oo dibadeed. Daayeer waxa loo tiriyaa xurmada by dadka deegaanka si ay waa in aan la dhibay oo loo ogol yahay in ay ku noolaadaan ee kaynta Sangeh. Daanyeero in Sangeh runtii jeclaa cuntada, waxay isku dayi doonaa in cuntada aad qaadato hesho, xitaa haddii cuntada ku jira bacda aad. Meeshan aad marag kici doonaan nolosha boqolaal daayeer ah kuwo gaar ah oo xiiso leh.
Xuduud Tanjung Benoa Nusa ducada, Bali waa xarunta ah ee hawlaha isboortiga biyaha oo kulan Bali. Astaamaha u gaarka ah xeebta Tanjung Benoa waa mid aad u xasilloon, sidaa daraadeed waxa uu ku haboon yahay noocyada kala duwan ee kulan biyaha oo xiiso leh. Noocyada kulan biyo aad halkan ka ciyaari kara, kuwaas oo Maalqabeenada, badda Walker, doon muuska, parasailing, wakeboard, waterski, jetski, Laagu, doon caagga, kalluunka duulaya, iyo kuwo kale. Intaa waxaa dheer oo sidoo kale waxaad aadi kartaa arki qoolleyda ah Rafaa qabtay oo gasiiraddii joogtay qoolleydana doon ka Tanjung Benoa.
Lake Batur Kintamani waa mid ka mid ah jiidashada dabiiciga ah ee Bali. Ku yaal buurta labaad ee ugu sareeya Bali, Lake Batur Kintamani leeyihiin hawada qabow iyo muuqaal cajiib ah. Kintamani Batur Lake waa u gudubno ugu weyn ee Bali kaas oo wax badan soo booqdaan dalxiisayaal ah maxaa yeelay waxa ay bixisaa view la mid ah jirin kale ee Bali.
Kecak waa qoob ka ciyaarka ah Balinese ugu caansan oo ugu xiisaha badan si ay u daawadaan. Meelo badan oo muujinaya jiid Kecak, waxaan u malaynayaa in ugu xiisaha badan waa Uluwatu Kecak ku yaal at Uluwatu. Kecak Uluwatu Kecak Balinese muujinaysaa horjeedo soo of qorrax dhaca ee Uluwatu waa mid aad u qurux badan. Qoob ka Uluwatu Kecak waa mid aad loo jecel yahay oo sidaas daraaddeed isugu haddii aad rabto inaad daawato show Kecak Uluwatu, waxaan u soo jeedin inay fariin ka maalmood fog.
14. Telaga Waja River aqado
Telaga Waja River aqado ku haboon yahay kuwa idinka mid ah oo jecel hawlaha mid farxad iyo loolan. Telaga Waja River ayaa biyo cad oo nadiif ah iyo Rapids in ka doodid. Dhamaadka aqado aad ka boodo doonaa saaqiyad ah, aad u xiiso badan. Ka dib markii la dhameystiro ku riyaaqayaa Telaga Waja River aqado, waxaad heli doontaa gunno ah ee foomka ku hogaaminaysaa ilaa buurta, sidaas darteed, isu diyaarin iyo nasasho ku filan sababtoo ah Telaga Waja River aqado daadi doonaa tamarta.
15. Ayung River aqado
Ayung River aqado uu leeyahay sifooyin kala duwan oo la Telaga Waja River aqado. Haddii Telaga Waja River aqado bixisaa oo caqabad ku ah, ka dibna ay Ayung River aqado bixisaa qurux. Panorama Wabiga Ayung waa mid aad u qurux badan, oo ay weheliyaan sawirro webiga qarkiisa ah, iyo geedo cagaaran hareeraha wabiga dhamaystiro quruxda River Ayung ka aqado.
10 Inta badan sixraya Places Lombok
Lombok Dalxiiska waa mid ka mida meelaha dalxiiska caanka ah ee dalka Indonesia. Sumcadeeda ayaa la aqoonsan beesha caalamka. Quruxda dabiiciga ah iyo qalaad indhaha Lombok bixisaa qof gaar ah oo safar xusuus. Dabiiciga ah Lombok ayaa magacaabay Rinjani volcano u sarraysaa sida qiyaas ahaan 3.726 oo mitir ka sarreeya heerka badda. Mount Rinjani in Lombok yihiin oo ay ku jiraan buurta seddexaad ee ugu ee Indonesia. Kala duwan Lombok ee kaalinta dalxiis ugu caansan waxaa ku badan ku soo jiita dabiiciga ah ee Lombok, iyaga ka mid ah sida xeebaha, buuraha, iyo wixii la mid ah.
Inta badan meelo dalxiiska ah caan Lombok
Dabiiciga ah Lombok waa hadiyad weyn oo Ilaaha Qaadirka ah la qurux iyo sifooyinka soo jiidashada leh dabiici ah in soo xero galiso. Qofna shaki sida quruxda badan ee xeebta ee Lombok, labada jeer ee qorrax iyo qorrax dhaca. Booqo qaar ka mid ah meelaha xiiso leh in Lombok idiin qaadan doonaa safar meelaha xusuus, sida Mount Rinjani. Ama, haddii aad ku xujeeysay in ay isku dayaan in fankooda Lombok? Waxaad ka heli doontaa ah mawjadaheedu u kulul adrenalin. Halkan waa kaalinta dalxiis ah oo uu soo caan Lombok iyo in aad ogaato.
Kuta Beach Lombok Dalxiiska
Tani ma aha Beach ee Kuta ee Bali, laakiin xeebta ah oo qurux badan oo ku yaalla koonfurta ee jasiiradda of Lombok. Kuta Beach Lombok waa mid ka mid ah tiro ka mid ah meelaha u xiiso badan ee u qalma Lombok aad samayn sidii goob dalxiis ah. Maxaa yeelay, xeebta juquraafi ahaan waxa ku wareegsan nooca buuraha. Intaa waxaa dheer, Kuta Beach Lombok ayaa bacaadka cad oo guud ahaan aan wax badan soo booqdaan dalxiisayaal. Ha la yaabin haddii ay xeebta dareemayo goostay marka aad u soo booqdaan. Kuta Beach Lombok la maamul ahaan ku yaalla tuulada Kuta, taala meel aan ka Lombok Airport International. Itineraries in Kuta Beach Lombok haddii laga qaado Senggigi qaadan doonaa qiyaastii 1.5 saacadood. Waxaad mari doonaa magaalada ka mid ah Mataram marka la qaadanayo, kuwaas oo safarada Senggigi - Kuta Beach.
Dalxiiska Lombok Senggigi Beach
Sidoo kale akhri maqaalka gaar ah oo sheegaya Senggigi Beach Lombok. Waa safar ugu caansan Lombok. Senggigi Beach ee Lombok ayaa xeebta qurux badan in jiidanayaa. Dalxiisayaal ajaanib badan oo u yimid inuu xeebta this. Senggigi Beach ekaysiiyaa mid ka mid ah jiidashada leh ee Lombok iyada oo leh muuqaal xeebaha ay dheer, run ahaantii jiidasho markii u arkaan meel fog iyo sare galay. Iyada oo xeebaha dheer oo adag, soo bandhiga midabo ciid Lombok Senggigi Beach ka madow si cad. Badda biyaha ayaa hirarku ma yahay mid weyn, cad, oo nadiif ah. Ayaa in ka dhigi Senggigi Beach ee Lombok wax noqdaan mid ka mid ah meelo dalxiiska jecel dalxiisayaasha shisheeye. Dalxiisayaasha soo xeebta this badan ku faraxsanahay in aan waqti la fuulayo marna, dabaasha, snorkeling, iyo ciyaaro xeebta.
Tanu waa meesha ay u isticmaalaysa in Lombok waa in aad soo booqato hadii aad rabto in aad ku raaxaysan hawlaha fankooda ama fankooda. Mid ka mid ah baraha mawjadihii xooggooda ugu caansan Indonesia ayaa sidoo kale loo magacaabay mid ka mid ah 10 meelaha ay u isticmaalaysa mawjadaha version cadaw ah ee International Association isticmaalaysa ah. Haddii aad taagantahay isticmaalo ee Desert Point, ka dibna waxaad qaadan kartaa safar la safarka sixiimad ka Bali in Lombok Sheets dekedda. Desert Point, dadka deegaanka u bixiyey Bangko-Bangko, waa meel xeebta fankooda ah oo ku yaalla xeebta Koonfur ee Lombok. Haddii aad ku yimid sheet Port ah, markaas safar si Desert Point gaaray by safar gaari ama baabuur kiro ah iyo qaadanayaa ilaa 2 saacadood. Point dagaanka ah ayaa, la heli karo marti ku hoydo fudud sida meel lagu hoydo. Desert Point waa mid ka mid ah indhaha ku ah Lombok lagu kalsoonaan karo.
Dalxiiska 4. Mount Rinjani Lombok
Mid ka mid ah soo jiidashada leh ee Lombok waxaa lagu caleemo sida Gunung Rinjani National Park, taas oo ah deegaanka in la ilaaliyo ee ay xukuumaddu kula qof ku yiil kaynta roob buuraleyda iyo Savannah. Bedka tan park qaranka wuxuu ku saabsan yahay 40 kun oo hektar. Mount Rinjani waxaa ku yaalla qaybta waqooyi ee Lombok Island kula sare ah ee 3.726 oo mitir ka sarreeya heerka badda, oo waa volcano labaad ee ugu sareeya Indonesia ka dib markii Mount Kerinci. Mount Rinjani leeyihiin bohol aad u ballaaran, waxaa jira ilaa badda, bohol loo yaqaan Lake Segara Canaaq ah. Sida ay aaminsan yihiin deegaanka, haddii meesha la arki Lake Segara Canaaq, ka dibna waxa ay calaamad u tahay in da'da daawadayaasha weli waa muddo dheer. Taa waxaa ka duwan, haddii ay hawadu ku eegay, waxay muujinaysaa dadka arki dhicisoobay. Lagula talinayaa in ay naftooda ka dhigaan ruux nadiif ah oo degan ka hor dib u Segara Canaaq Lake. Gudubno Tani waxaa laga sidoo kale loo isticmaali karaa kaalinta kalluumaysiga ah.
5. Gili Air, Gili Meno, iyo Gili Trawangan, Lombok
Sidoo kale loo yaqaan saddex jasiiradda qalaad ee Lombok oo noqday mid ka mid ah meelaha ugu cadcad ee dalxiisayaasha shihseeye. Dyke ama jasiiradda ku yaalla qaybta galbeed ee Lombok ayaa biyaha badda waa cad iyo rootiga, ciid nadiif ah oo cad, Qoryaale shacaab, iyo kalluunka kala duwan oo soo jiidasho badan ornamental. Dad badan oo dalxiisayaal u soo Dyke this inay ku raaxaystaan ​​quruxda xeebta leh dabaasha, snorkeling, marna. Waxaa jira goobaha dadweynaha badan yihiin dhamaystiran at this Lombok baro dalxiiska, oo ay ku jiraan hoteelo iyo dhammi, makhaayadaha, makhaayadaha, diskotigyada, iyo goobaha cibaadada. Laga soo bilaabo dhulweynaha Lombok, safraya Dyke saddexaad qaadataa qiyaastii 30 daqiiqo. Gili Trawangan waa jasiiradda fog ee u dhexeeya saddex Dyke ah. Dad badan oo dhallinyaro ah, kuwaas oo u yimid inuu Gili Trawangan sababtoo ah inta badan xisbiga xeebta leh music lagu qabtay habeenkii oo dhan. Dhanka kale, Gili Meno waa meel sax ah si aad u nasato, waayo, kuwa doonaya in ay dooni ku dajiyay oo wuxuu ku raaxaysan jawiga ee xeebta waa mid yara degan. Booska Gili Meno waxa uu ku yaalaa dhexe ee ka mid ah saddex Dyke ah. Iyadoo Gili Air ugu dhow jasiiradda of Lombok. Dalxiisayaal badan ayaa u yimid inuu Gili Air wada qoysaskooda. Gili Air ayaa dadka degaanka ah oo ka badan Dyke kale.
Dalxiiska 6. Selong Belanak Lombok Beach
Intaa waxaa dheer in Senggigi, tani waa mid ka mid ah dibad-xeebta ee Lombok jiidasho ku. Xeebta Belanak Selong waxa uu ku yaalaa Regency Central Lombok, ayaa xeebaha cad ciid ah iyo waxa daahirka.
Badar ciid xeebta waa si fiican, laakiin markii loo feydo biyaha badda qallafin doonaa. Sidaa darteed, waxaad ku arki doontaa dhowr ah oo baabuurta la marayo xeebaha marayay karo. Waa mid ka mid ah indhaha oo xiiso leh ee xeebta Lombok.
7. Tanjung Aan Beach Dalxiiska Lombok
Si aad u timaadid Tanjung Aan Beach, waxaad u baahan doontaa waqtiga safarka ee ku saabsan 1.5 saacadood ah ka kaxeeyo magaalada ka mid ah Mataram. Ciid nadiif ah oo cad iyo buluug biyaha badda oo cad waa mid ka mid ah sifooyinka in this Lombok meelo dalxiiska ah. Juqraafi ahaan, booska uu ka Tanjung Aan ku dhow yahay inuu Kuta Beach Lombok. Socdaalkan waxa uu si Tanjung Aan Beach ka Mataram si habsami leh doono, maxaa yeelay, jidadka yihiin laami oo sakhiran si deg deg ah aad u qaadan doonaa si aad u socoto.
Soo jiidashada Kuwan waxa ka yar si weyn loo yaqaan oo ay dalxiisayaal badan. Intaa waxaa dheer, wadada helaan in ay Bloam Cape ayaa sidoo kale aan si wanaagsan. Waddada lagu gaarayo meeshan aan weli u bannaysay, sidoo kale inta badan waxaad ka heli doontaa muuqaal ah oomane iyo madhalays jidka si Cape Bloam. Headland Tan waxaa ku yaalla qaybta koonfureed ee Lombok, maamul ahaan ka mid ah degmada West Lombok. Route si Cape Bloam haddii laga qaado Mataram qaadan doontaa 2.5 saacadood. Xoog Cape Bloam waa qurux Muuqaal dusha laga xeebaha, taasi waa mid la filayo ugu weyn Waalan mid ka mid ah xeebaha Lombok ee. Bloam Cape ayaa, waxaad arki doontaa qoolley leh ilaalinta Habitat agagaarka qarar oo waa xeebta in fidiyo ka dhamaadka waqooyi ilaa koonfur ah. Cape waa, waxaad arki doontaa ekeeyey labada dhagaxyada in garabka xeebta. Muuqaal dabiiciga ah ee xeebta si qurux badan, waxaad ka heli doontaa ciid cad oo wax fiiriyey sida buluug iyo madarad oo biyaha badda cad oo waxaa iska leh Tanjung Bloam.
Dalxiiska 9. Sekotong Lombok Beach
Soo jiidashada dalxiiska Sekotong Beach waxa uu ku yaalaa degmada West Lombok. Soojiidashada ee Lombok waa fudud loo heli karo ka dariiqyada kala duwan. Kuwani Sekotong Beach ka Mataram qaadan doonaa ilaa 1 saac la fog ee 60 mm dhex mari Sheet Harbour. Haddii aad waddo ee xeebta Selong Belanak Bartamaha Lombok, markaas fogaanshaha in Tani Beach ee Sekotong ku saabsan tahay 75-85 km.
10. dhaqanka House Hamlet Sade Lombok
Hamlet Sade ee tuulada Rambitan, Degmada Pujut, Central Lombok. Dadka deggan tuulada ay tani tahay oo daggan Sasak, bulshooyinka weli u hoggaansamaan dhaqan caado Lombok ilaa haatan. Nidaamka bulshada iyo dadka ee nolol maalmeedka ee Hamlet ee Sade weli waa mid aad u xoog badan leh Sasak caado ah marxalad teesto ah. Sidaa darteed, Hamlet Sade aasaasay sida tuulada loo dalxiis tago ee gobolka West Nusa Tenggara ah. Astaamaha u gaarka ah guryaha la dhisay ka mid ah baasaboorka la saqaf ka timaada caleenta oo cawsduur. In meeshan, caadiga ah guriga dhaqanka Sasak joogsaday adag oo lagu hayo
10 Meelaha ee Papua Waajibka ah booqday
Haddii aad u malaynayso Indonesia waa wax soo jiidasho badan dalalka ku yaalla Yurub waxaa, isku day in booqasho uu ku Papua. Jasiiradda easternmost Indonesia ayaa wax walba qurux dabiici ah go'aynin si loo baadho. Land iyo dabeecadda quuska Firdooska ah oo u gaar ah taageerayaasha dabiiciga ah dalxiiska. Ma aha oo kaliya dabiiciga ah hodan, Papua sidoo kale badbaadiyo xigmadda deegaanka dhaqanka in weli badbaadaan in marxalad tan casriga ah. Sahaminta Papua Dhab ahaan wuxuu noqon doonaa waayo-aragnimo xiiso leh oo kuu sheegi karaa in qoyska iyo saaxiibada.
Booqo Papua, Xoolo jelalajahi ee dalkooda. Haddii wali qasan meel ay aadaan maxaa yeelay, waxaa dambe, ka dib markii warbixin kooban oo ka mid ah 10-jiidashada leh ee Papua oo waa in lagu soo booqan doonaa,
Park qaranka, iyadoo meel ka mid ah 1.453.500 hektar yahay ku dhawaad ​​90% oo ah qaab biyo. La yaab ma aha, park ee Cendrawasih Bay noqday ugu weyn ee meesha ilaalinta badda iyo ugu weyn ee Indonesia. Halkan, waxaa jira 196 nooc oo molluscs iyo 209 nooc oo kalluun in aad ka arki kartaa in Xukunka quuska. Ma qabsiyada qoolley, qoolley, ee IMB oo hoonbarrooyinka sidoo kale kuu raaci halka istuuray.
Cendrawasih Bay National Park waxaa la dhisay sanadkii 1993 by Wasaaradda Dhirta. Intaa waxaa dheer in ay ku riyaaqayaa nooca quuska, waxa kale oo aad ka soo sahamin kartaa jasiiradaha. Mioswaar Island, mid ka mid ah jasiiradaha ee Papua meelo dalxiiska, ayaa god la il kulul kula content baaruud in istaahilaa aad booqasho. Intaa waxaa dheer Mioswaar Island, weli waa Yoop Island, numfor, Nusrowi Island iyo jasiiradaha kale ee ay tahay in aanad ka maqnaan.
Soo jiidashada Kuwani waa in labada degmo maamul ee Wondama iyo Nabire. Park qaranka sidoo kale waa xarun cilmi baaris ah ama ah ee IMB ayaa shark nibiriga nibiriga ugu geysteen dowladda oo kaashaneysa NGO-yada ee gudaha iyo dibadda dalka.
Oo aan ogayn Ampat Raja ah? Mid ka mid ah meelo dalxiiska ee Papua ee quruxda soo jiitay dalxiisayaal gudaha iyo dibadda. Gobolka Raja Ampat ka kooban yahay afar jasiiradaha badan oo Waigeo, Misool, Salawati, Batanta iyo jasiiradaha yaryar oo goobta joogay.
Raja Ampat wuxuu leeyahay nolosha kala duwan badda. Sida laga soo xigtay warbixin ka soo Conservancy Nooca, sida ugu badan ee 75% ka mid ah noocyada badda ee adduunka ee laga helo biyaha ee Raja Ampat. Inta lagu guda jiro quusid, waxaad la socon doona oo ku saabsan 1.511 nooc oo diinka oo kalluunka iyo badda. Xiiso, huh? Inta aad xor u tahay inaad mar walba quusin sanadka oo dhan halkan, laakiin waqtiga ugu fiican waa in October iyo November. On bilood kuwaas, hawo fiican iyo biyo waa mid aad u cad si aragti markii lagu boodo waa fiican.
Haddii aadan rabin in la quusin, weli quruxda Raja Ampat aad ku raaxaysan karaan in ay sameeyaan ay gelaan gasiiradaha. Waxay ka cabsanayaan ee is waayay? Is dejiya. Waxa aad isticmaali kartaa adeegyada ay hage ah oo halkan. Guides in kaalinta dalxiis waa dadka deegaanka kuwaas oo maalin walba ka shaqeeyaan sidii kaluumaysato. Ha ilaawin in aad soo lowska betel ama nacnac in la siiyo dadka deegaanka. Qaadka lowska betel waxaa loo arkaa calaamad u ah saaxiibtinimada iyo ka dhigi doonaa in aad wax dheeraad yaqaan iyaga la.
Halkan, waxaa jira qadiin badan oo aad ka iibsan kartaa sida qadiin ah laga bilaabo farshaxan Asmat dhaqanka ee alaabtii muusikada iyo dhar dhaqameed.
Lake la meel ka mid ah 9.360 hektar waa u gudubno ugu weyn ee Papua. Waxay ku taallaa 50 km ka badhtamaha magaalada Jayapura, Sentani Lake waxay bixisaa qurux cajiib ah. Waxaa jira ugu yaraan 21 jasiiradaha in qurxin u gudubno, oo leh height a of 75 mitir sareeya heerka biyaha badda.
Waxaa jira hawlo badan oo aad halkan samayn karaa laga bilaabo dabaasha, kaluumaysiga, cunidda, Kuliyadda harada ku hareeraysan kiraysto doon si ay u helaan harada ku hareeraysan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira 24 tuulo oo ku hareereysan meelahan waa la booqan karaa si toos ah iyo muwaadiniinta la falgalaan. Muuqaal ah oo isku xigta ka mid ah guryaha ku stilts shabag kalluumaysiga ah wax dabiici ah in aad aragto halkan.
Waa maxay xiiso leh waa dhacdo sanadlaha ah waa Sentani Lake ee Festival waxaa badanaa lagu qabtay badhtamaha bisha June. Ugu iidda, halkaas oo ay ku Papua dalxiisayaal buuxda disesaki kuwaas oo doonaya in ay arkaan kala duwan ee fanka iyo dhaqanka maxalliga ah ayaa u safri doona. Intaa waxaa dheer in ay ku riyaaqayaa qaab lagu jiro iidda, waxa kale oo aad ka dhergin karo carrabka iyo caloosha la caadiga ah cunnada ay u adeegi jireen in Papua halkan waa badan yihiin.
Lake Paniai aan ka yarayn xiiso leh ka Lake Sentani. Gudubno, waxaa xitaa loo yaqaan gudubno ugu quruxda badan ee Lake Se-World Shirka ee Hindiya 30kii November 2007, taas oo raacay 157 dal. Gudubno, wuxuu ku yaalaa sare ah ee 1,700 mitir sareeya heerka biyaha badda la meel ka mid ah 14,500 oo hektar. Ugu fiidkii, muuqaal ah waa indhaha aad u qurux badan. Waxaad ka arki kartaa dushana ee dhagaxyada dhexdooda, Shimbiraha duuli kor ku xusan oo badda lagu daray doonyaha kalluumaysiga deegaanka oo bilaabay guriga ku dhow.
Halkan, waxaad si wadajir ah uga kalluumeysan kartaa qabiil dumarka Mee iyo Moni caadi ahaan loo yaqaan 'mama'. Paniai Lake waa mid ka mid ah soo saare ugu weyn kalluunka biyaha saafiga ah ee Papua, kalluun badan oo aad halkan ka heli sida kalluun, tilapia iyo kalluunka tilapia.
Goobaha bixiyo meelo dalxiiska ee Papua waa arrin dhameystiran ka guardhouse ah, Tusaale ahaan, kirada qalabka doon iyo kalluumaysiga ah, si xero cunto harada ku hareeraysan. Haddii aad rabto in aad ku raaxaystaan ​​quruxda Lake Paniai dheer, waxaad joogi kartaa dadka deggan guriga.
Baliem Valley waxay hoy u tahay, Dani ka Yali iyo Lani ku yaalaan agagaarka Buuraleyda Jayawijaya ah. Waxay ku taallaa at sare ah ee 1,600 mitir ku xusan badda meeshan heerkulka gaari karaan 10-15 darajo Celsius habeenkii sameeyo. Halkan, waxaad ka arki kartaa oo si toos ah ula qabiilooyinka hooyo dhexgalaan weli xiran ubbodibadeedyona guska ragga iyo darfaha dharkaagana iyada faraqa.
Bishii August, Baliem noqday meelo dalxiiska ee Papua oo soo jiidata dalxiisayaasha badan. Inta lagu guda jiro dhacdo sanadlaha saddex maalmood in la qabtaa Baliem Valley Festival. Bandhigu wuxuu run ahaantii waa hab ka mid ah xukuumadda in ay joojin dagaaladii qabaa'ilka in inta badan halkan ka dhacaan. Dagaal Qabiileed ayaa lagu ganaaxay, halkii iidan lagu qabtay in dagaalka beddeleen ah fanka iyo dhaqanka si ay ugu yeedhi dalxiisayaal.
In dagaalka iidan, waxaa jira xaaladood in loo maamulo. Sida caadiga ah dagaalka ka horreeyo doona afduubka ee haweenka mid ka mid qabiil ama xatooyo ee halkan doofaarka xoolaha reer. Intaas waxaa sii dheer, dagaalka ka dhici doona laga bilaabo tumaysa oo qabiil iyo raacidda music dhaqanka. Intaa waxaa dheer in dagaal, sidoo kale waxaa jira tartan u dhexeeya tuulooyinka jinsiyadaha doofaarka oo la dubay iidda hilibka doofaarka. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa farsamada gacanta hantaan qabiilooyinka deegaanka.
6. Dalxiiska Village Sauwandarek
Marka in Baliem aad la falgala qabiilooyinka ku nool buuraha, ee tuulada Sauwandarek aad si toos ah ula qabiilooyinka hooyo ku nool xeebaha kulmi karaan. Tuulada Sauwandarek wali meesha ah ee Raja Ampat, si hufan ee Mansar Meos ah. Halkan, waxaad ka arki kartaa guri dhaqameed oo qoryo laga sameeyeyba iyo saqafka caws engegan oo kale.
Indhaha ku dhaqanka waxa uu ku mashquulsan oo kaliya 46 qoys. Haweenka halkan loo isticmaalo in laga sameeyo koofiyado iyo bacaha badda caleemo pandan. Haddii aad shaqadooda jeclaa, aad ka iibsan karto isla goobta.
Halkan, waxaad quusin karo iyo Maalqabeenada. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad hogaaminaysaa karaan si ay u gudubno, waa mid gaar ah tuulada this. Magaciisa Telaga Yenauwyau, waa mid gaar ah maxaa yeelay biyaha ee harooyinka balli, ma biyaha saafiga ah sida biyaha oo kale ugu badda. Sida laga soo xigtay dadka deegaanka, badda ay la joogo ma jiro qubo cad in haddii aad ka dibna waxa ay u arkaan in aad leedahay doonaa nasiib wacan.
Diyaari camera sababta oo ah quruxda xeebta taasi ka dhigi kara ma aad joojisid qaadashada sawirada. Xeebta Bosnik waxa uu ku yaalaa 15 km bartamaha magaalada Biak ayaa bannaanka u baaxad weyn oo ciid biyo cad buluug ah iyo saf ah geed oo timir ah, taas oo ka dhigi muuqaal fiican oo la taagan taallo la camera aad u.
Soo jiidashada dalxiiska ee Papua waa kaamil loogu talogalay nasashada qoyska. Iyada oo dabcan Rupiah mushaar 10,000, aad ku raaxaysan karaan quruxda xeebta ku yaala tuulada Woniki this. Ka sokow ciyaaro Volleyball-ka xeebaha ee meelaha cammuudda, waxa kale oo aad kiraysan kartaa buulal qiimo ah 50,000 Rupiah oo wuxuu ku raaxaysan sidoo kale baraf qumbaha cusub loogu badali lahaa deegaanka.
Xeebta Amai waa kaalinta dalxiis waa xaq aad raba xasilloonida ah. Xeebta Tani waa mid xasilloon, laakiin kama dhigna soo jiidanayn. Dhamaadka xeebta, waxaa jira estuary webiga ka dhigaya iyo harooyinka iyo biyaha saafiga ah ku kulmaan halkan ah. Biyo Tani cusub waxaa loo isticmaalaa by dalxiisayaal ah in aad iskaaga raaci ka dib dabaal xeebaha.
Dabaasha sokow, waxaad sidoo kale ka ciyaari kara volleyball xeebta, istuur, snorkeling ama nasashada ee balka ah in aad kiraysan kartaa qiimo ah 50,000 Rupiah. Haddii aad rabto in uu sii joogo, xeebta Amai yada style guriga ku hoydo hore u heli.
Xeebta Amai waxa uu ku yaalaa Depapre Degmada ama ku dhawaad ​​2 saacadood ka kaxeeyo Jayapura. Socdaalkan waxa uu si xeebta tijaabin doonaa adrenaline sababtoo ah dhul oo fuuli jiray kor iyo hoos, laakiin wax walba waxaa la bixin doonaa marka ilaa iyo arko quruxda Amai Beach. Si aad u hesho meelaha kuwan, waxaa loo baahan yahay inaad bixiso 25,000 Rupiah oo ka mid ah kharashka la dhigto.
Rumberpon jasiiradda ku yaalla Wondama Gulf ama 5 saac safar doonni ka Manokwari. Jasiiradda waxay leedahay xeeb ah oo lagu magacaabo Pasir Panjang sababtoo ah waa xeebaha aad u dheer oo gaarey 6 km.
In meelahan, waxaad sameyn kartaa hawlaha halbowlaha sida quusidda, snorkeling, dabaasha iyo kalluumaysiga ah. Haddii aad rabto in aad waayo-aragnimo kala duwan, isku day booqanaya kaymaha mangrove in kale xeebta ah ee jasiiraddan. Waxa kale oo aad tegi kartaa grassland shimbiraha in aan halkan ku arko deerada.
Taalladaas MacArthur waa baad ah xusuus in General Douglas MacArthur oo ahaa guud ee Maraykanka inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida. Taalladaas Tani waa in Ifar Mount, Jayapura. Halkan, waxaad tagi kartaa matxafka, wuxuu arkay sawirada iyo taariikhda ciidamada General MacArthur. Soo jiidashada dalxiiska ee Papua waa in ay ka markhaati Liibaan ee general weyn oo dhowr istiraatiijiyad dagaal weyn. Waxay ku taallaa at sare ah ee 325 mitir ka sarreeya badda, waxaad ka arki kartaa Lake Sentani Sentani Airport Airporka ka halkan.
Taalladaas MacArthur laftiisa waa ka taagtay leh height a of 3 mitir waxaa ku badan jaalaha ah iyo madow. Taalladaas Tani waxa ku qoran taariikhda General Douglas MacArthur ee Indonesia iyo English.
Guudmarka MacArthur ah, guud ahaan waxaa loo yaqaan erayo uu la, "Waxaan soo dhex yimid oo waxaan ku noqon doonaa. Waxa uu sheegay in halka tan xeryaha milatariga ee Philippines waxaa lagu halligay Japan oo isaga iyo ciidamada uu lagu qasbay in ay u qaxaya Australia. Ka dib markii istaraatijiyad dagaalka, 1944 uu ka degay, Gulf Hamadi ka Jayapura, iyo in la dhiso taallo goobta ee xarunta MacArthur ee ku yaalaan maanta. Guud in uu dhibcood sababtoo ah markaas isaga iyo ciidankiisii ​​laga takhalusay, Japan iyo ka aarsadaan guuldaradii of America ee Filibiin iyo Pearl Harbour.
Meelaha of Interest in Indonesian Gobolka Island Borneo
Soo jiidashada dalxiiska jasiiradda of badan Borneo ay kala kulantay West Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, North Kalimantan iyo Bartamaha Kalimantan.
Jasiiradda Borneo sidoo kale waa goob dalxiis booqday by dalxiisayaal badan oo shisheeye iyo kuwa maxalliga ah. Intaa waxaa dheer in Jasiiradaha kale in ay leeyihiin soo jiidashada badan oo dalxiis
Jasiiradda Borneo sidoo kale waxa uu indhaha ku badan yihiin aad u xiiso badan.
Jasiiradda Borneo waa jasiirada ugu wayn ee Indonesia iyo sidoo kale degan jasiiradda saddexaad ee ugu weyn adduunka kaas oo sidoo kale noocyo badan oo meelo dalxiiska ah sida soo jiidashada dabiiciga ah, taariikhi ah, safarka dhaqanka, iyo qaar kaloo badan. Jasiiradda Borneo u qaybsan yahay 5 gobolladiisii ​​oo gees kasta, sidaa darteed haddii booqday jasiiradda noqon doonaa badan oo la doortay, haddii kaalinta dalxiis oo kaliya halkaas oo aad rabto in aad hore soo booqato.
Kuwa soo socda meelo dalxiiska ah ee jasiiradda Borneo:
Meelaha of Interest ee West Kalimantan
Sentarum Lake Park Qaranka ee Kapuas
Pasir Panjang in Singkawang
National Parks Bukit Baka-Bukit Raya in Heart ee Borneo Island
Madaxtooyada Kadriah in Pontianak
Parks Square Kapuas in Pontianak
Jasiiradda Randayan in Bengkayang
National Park Mountain xabaal ee Ketapang
Kur madow ee degmada Sintang
Taman Bukit Bougenville in Singkawang
Park Siinka dheer Island ee Singkawang
Siinka dheer Zoo ee Singkawang
Museum ee magaalada Dara Juanti Sintang Sintang
Meelaha of Interest ee Bariga Kalimantan
Bukit Bangkirai in Samarinda
Jempang in Kutai Barat
Botanisk Unmul in Samarinda
Biyo-dhac Tanah Merah in Smarinda
Boqortooyada Gunung Tabur in Berau
Museum Mulawarman in Tenggarong
Jasiiradda Derawan in Berau
Webiga Kayan in Bulungan
Biyo-dhac Long Pin in Tanjung Selor
Kutai Park Qaranka ee Bariga Kutai
Webiga Mahakam ee West Kutai
Meelaha of Interest ee South Kalimantan
Sabayn Suuqa Muara Kuin ee Banjarmasin
Ubaxa Island ee Barito Kuala
Goa Batu Hapu in Tapin
Wasaka Museum ee London
Mount Bamega in Kotabaru
Jasiiradda Naxdey in Barito Kuala
Goa Doofaaro Tabalong
Dooxada Kahung in Banjar
Museum Mangkurat in Banjarbaru
Candi Laras in Tapin
Buundada Rumpiang in Barito Kuala
Xeebaha Batakan in Tanah Laut
Madang qalcaddayda buurta ee South Sare River
Xeebaha Takisung in Tanah Laut
Meelaha of Interest ee North Borneo
Kaneecada River ee Nunukan
Amal xeebta magaalada Tarakan
Xeebaha Land Yellow in Nunukan
Buurta Rian ee Tana Tidung
Lamapu dhagax ku Nunukan
White Mountain in Bulungan
Sesayap ee Tana River Tidung
Biyo-dhac Martin Billa in Malinau
Meelaha Bartamaha Kalimantan
Lake Tahai in Palangkaraya
Xeebta Edge Pandaran in Kotawaringin
Tanjung Puting Park Qaranka ee Kotawaringin
Monument Tiyaatarka Sambi ee West Kotawaringin
Museum Balanga in Palangkaraya
Kooxda Beach dalxiiska Park ee Palangkaraya
Cascade River ee Setongah Degmada Lamandau
Niagara Palei Kodan ee Degmada Lamandau
Buuraha lahaa Taalo in Sukamara
Xeebta Cape Nipah in Sukamara
Bird Lake ee Sukamara
Niagara Stone Mahasur in Gunung Mas
Cape of Good Hope ee West Kotawaringin
Laga soo bilaabo liiska meelo dalxiiska ah in ay jiraan in kor ku xusan waa meelo dalxiiska ugu badan ee la yaqaan / yaqaan, iyo haddii ka mid ah liiska kor ku xusan waxaa weli jira dhamaystirnayn, waxaan ka raali gelinayaa. Hadda waxaad ka akhrisan Territory Places jasiiradda Borneo, mugkin sidoo kale aad xiisaynayso reading soo jiidashada kale dalxiiska.
10 goobaha la booqday Waajibka ah Ambon
Ever maqlay ereyga 'Ambon Manise'? Eraygan waxa sida caadiga ah loo yaqaan in ay ku ammaaneen quruxda magaalada Ambon. Ambon ayaa booqday by quruumo badan laga bilaabo Yurub, Shiinaha in ay Carabi, sababtoo ah waxay soo jiidatay oo ay maal dabiiciga ah ee caasimadda gobolka Maluku. Xataa Shiinaha ee qarnigii 7-dii sheegaye dalkan sida Ehlu dhexe ee badda.
Ka dib markii in ka badan toban qarniyo maray, Ambon weli guuldarro ay ka soo jiidashada. Buux qurux dabiici ah, u wac xeebta Liang iyo Nusa Pombo bixiya gaar ah Muuqaal dusha laga xeebta. Ma aha oo kaliya dabiiciga ah, sidoo kale Ambon badbaadin badan oo Mala'igtu xambaari taariikhi ah oo xiiso leh in ay dijelalajahi.
Ma doonaysaa in la caddeeyo sida macaan this magaalada? Booqo 10 meelo dalxiiska ee Ambon soo socda:
Nusa Pombo la gaadhi karo saacad ka dekedda ee Ambon by doomuhu gudahood. Jasiiradda waa Anfaco, si aad u soo qaadato cunto iyo cabitaan ay u dhadhamiyaan. Haddii aad rabto in uu sii joogo, aad samaysan karaa teendho halkan. Ha ilaawin in aad soo qaado qalab kaambada iyo in loo diyaar garoobo in la sameeyo meelo kale u hayaamo halkan.
Hawlo kala duwan oo aad sameyn karto kaalinta dalxiiska ee Ambon ah waxaa lagu dabaasho, istuur, snorkeling iyo hogaaminaysaa agagaarka jasiiradda. Nusa Island Pombo memilliki yaqaan adduunka quuska hodan in qof gaar ah, sida quusid xiiso leh.
Xeebta ayaa waxaa kaloo loo yaqaan this Hunimua Beach ayaa loo magacaabay Qaramada Midoobay sida xeebaha ugu quruxda badan dalka Indonesia 1991. Dabcan tani ma aha sabab la'aan, indhaha Ambon leeyahay ciid cad oo ay weheliso crystal biyo cad buluug ah ka dhigaya marna ma heli daalay quruxdiisa ku riyaaqayaa.
Hirarku xeebta ma yahay mid weyn oo sidaas waa ku haboon biyaha play. Haddii aadan rabin inaad hesho qoyan, waxaad cadceedsato karaa meelaha cammuudda. Selan, isku xigta geedaha caleenta lasoo xeebta aad isticmaali karto si hoy halka riyaaqayaa cunnada maxalliga ah.
Kaalinta Tani dalxiis oo ku yaalla tuulada Liang, Degmada Salahutu, ama qiyaastii 40 km u jirta bartamaha magaalada ku Ambon. Si lagu daro xeebta Liang, waa inaad bixiso 15,000 Rupiah.
Weli degmooyinka isla xeeb Liang, xeebta ma Natsepa oo sidoo kale bixisaa qurux caadiga ah ee xeebta. Biyaha badda ee meelahan waa cad yahay, si aad u arki karto dabaasha kalluunka fudayd ka.
Daaleen kalluumaysta xeebta?
Daaleen kalluumaysta xeebta? Waxaad kiraysan kartaa doon heerka 20,000 halkii saac iyo dareento dareen ah ee kalluumaysiga ay ka geysanayaan badweynta. Haddii aadan jeclaan kalluumaysta laakiin waxa ay doonayaan hilib cusub, isku day in ay suuqa soo kalluunka taas oo kaliya 700 oo mitir ka kaalinta dalxiis this ka. Waxaad ka iibsan kartaa kalluunka cusub qabsatay kalluumaysatada maxalliga ah.
Ha iloobin in aad ku dhadhamiyaan salad caadiga ah midhaha Natsepa Beach. Xeebta waxaa lagu yaqaanaa salad miro daray ah ayaa la iibin agagaarka xeebaha. Furuto sida cambe iyo kaashuuga Maraqa lowska lagu daray sonkor brown noqon lahaa qado aad u cusboonaysiinta ee xeebta Natsepa.
Xeebta waa meelo dalxiiska mar caanka ah ee Ambon kuwaas oo soo booqday. Si ka duwan xeebaha hore ay leeyihiin ciid u fuulayo marna, xeebta waxaa ka buuxsamay dhagaxyada. Laakiin in macnaheedu yar Gate City ee Beach qurux badan ma.
Waa maxay xiiso leh oo ku saabsan xeebta tani ay tahay joogitaanka gabiga ah shacaab Hidiya bahal badda la god weyn oo u eg albaab ah. Firidhka biyaha ka soo qaadda hirarka badda garaacid qarar ku noqday mid ka mid ah kooxda martida indhaha ku jecel. Ka sokow caadiga ah la gelin magazine ku sawiran u dabiiciga ah, qarar waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sida sawirka asalka prewedding by Lamaano badan.
Kaliya kula 5000 xaddiga, waxaad ku raaxaysan karaan quruxda meelo dalxiiska ee Ambon ah. Ha walwalin haddii aad illowdo in aad soo qado, maxaa yeelay, halkan waxaa jira wax badan oo iibiya cuntada.
5. Beach Isdeji
Sida magaca uu tusinayaa, xeebta ku habboon in ay isticmaalaan sida goobta madadaalada. Daal iyo caajis la joogtada ah ee maalin kasta lagu bixin doonaa in dhibco dalxiiska ee Ambon. Iyadoo ku riyaaqayaa aragtida xeebta, ha iloobin in aad ka dalban mooska la shiilay iyo shaaha macaan in noqday midka mid ah Kuliyadda halkan.
Waxaad doonaysaa in aad quusin iyo Maalqabeenada laakiin caajis in ay keenaan oo ay qalabka? Deggan, waxaa jira ah istuur iyo snorkeling qalabka halkan kirada. Waxaad ku raaxaysan karaan quruxda Coast dunida quuska Is dejiya aan ka kaaftoomi ee waday qalab istuuray
10 Meelaha jecel ee Gobalka Waqooyi Maluku
Sida magaca ku soo jeedisay, Orange Fort ka dhisay dowladda gumeysiga Dutch ee 1607. Waqtigaas, Fort Orange loo adeegsaday sida ee xarunta faxaxay ka hor inta aan lagu wareejin Jakarta in 1619. Hore Fort Orange ayaa sidoo kale sida ay deggan ee dalka Holland ee loo isticmaalo taliyaha Ternate. Currently Fort Orange loo adeegsaday sida xarunta ciidanka iyo booliiska ee Indonesia, laakiin dalxiisayaal ah ayaa weli loo ogol yahay in ay arkaan waynida ee Fort Holland.
Marka ay timaado in North Maluku diyaarad, Volcano Gamalama hubaal arkay samada ka yimid. Buurta High kor ku xusan badda 1/721 ahayd calaamad in aad ku soo gashay gobolka North Maluku. Volcano A ku jirta oo badda dhexdeeda waa weli firfircoon, ka hor 1990, inta badan volcano Gamalama ka dillaacay. Waxa xiiso leh, on dalcadaha Volcano Gamalama weli tuulada dhaqameed loo yaqaan Village Marikurubu oo hayn caadooyinkooda.
Si loo gaaro tuulada Marikurubu, waxaad u baahan tahay inay fuulaan ka Mountain Naarta Gamalama. Fuulid ah in shir-madaxeedka ee Mount Naarta Gamalama sidoo kale ma adag oo ay qaadato oo kaliya 4 saacadood. Inta lagu guda jiro jiirtii, aad ku raaxaysan karaan aragtida ah xoqayaa dhego yare jir. Waxaa la sheegay oo ah gobolka ay yihiin geed dunida ee dhego yare ugu da'da weyn, gaadhay 400 sano jir. Geed jir Wreegay weli aysan awoodin in ay soo saaraan 400 kg ee xabo oo sanadkiiba. Aragtiyaha laga shir Buur API Gamalaman aad u cajiib ah.
Muddo 5 KM u jirta Veda Degmada, Central Halmahera, Goa Sagea ayaa laga galo ballaaran yahay 20 mitir oo laba jibbaaran iyo godkii dheer ilaa 30 KM u jirta! Sagea ka qeyb Goa waxaa ka buuxsamay stalactites midabyo gaar ah. No qoraxda soo socda iyo heerkulka hawada xataa Goa Sagea waxay gaadhi karaan hooseeya eber degrees. Inkastoo khiyaanadu, safra dheeraad ah la jirrabo inuu raadsado qarsoodiga god this.
Morotai Island u muuqataa mid gaar ah, waayo, dusha sare waa jasiirad ilaa xad guri. Tani jasiiradda yar oo ay leedahay taariikh dheer marka waxa ay noqotay xarunta dagaalka ee Japan intii uu World War 2. Ilaa ciidamada huwanta markaas qabsaday iyo dagaal samaynta Morotai Island sida saldhig. Dabcan, marka biyaha badda ay hadda jasiiradda of Morotai dagaal maal, dukaanka badan oo imika waxa uu noqday dalxiiska soo jiita, waayo, a. Baabuur aan tiro lahayn iyo maraakiibta in degtay Biyahan.
Gobolka Angus Stone waa meesha uu socodka dhagax dab in laga fariisiyo markii volcano ka qarxay 1737. Gamalama meel aan ka fogayn madaarka ah. Petrified madow jet dhagax dab iyo haatan waa in dhanka bidix iyo midig ee wadada. Socodka degaanka ee Angus Stone Hiri Island, halka riyaaqayaa muuqaal ah soo jidaan karaan qiyaaso sida awooda badan Tanuurkii Gamalama.
Halmahera Island waa jasiirada ugu wayn ee gobolka North Maluku, daboolayaa qiyaastii 17 780 mitir oo laba jibbaaran. Milicsiga u eg jasiiradda of Sulawesi, iyadoo afar ka mid ah Jasiiradda. Dhaqanka Halmahera Island waa mid aad u gaar ah, sababtoo ah dadka ku nool waa isku dar ah ee reer Portugal, Gujarati, Carabi, Malaysia, iyo Holland. Intaa waxaa dheer in isagoo soo jiidashada leh sida badda oo Tanuurkii burqaday, Halmahera Island ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay qaar ka mid ah tuulada dhaqameed aad u xiiso badan in ay soo booqdaan.
Niagara Cibi Cebi taas oo uu leeyahay height a of 14 mitir qulqula Waci River oo ugu dambeyntii faaruqdo galay xeebta Bariga Halmahera. Si loo gaaro biyo-dhac tan, waxaad u baahan tahay meel fog oo 7 KM u jirta Waci doon ilaa 30 daqiiqo.
Originally dhismahan ahaa degenaanshaha ee Shah Sultan Mukhsin. Laakiin ugu danbeyn loo isticmaalaa sida kedaton Sultan Bacan sababtoo ah kedaton milikSultan Sadik Shah burburiyey Duni War 2. Ugu dambeyntii, dhismaha si rasmi ah u noqday xarunta dowladda Saldanada Bacan. Ilaa iyo hadda, dhismihii asalka weli la hayo, marka laga reebo saqafka ayaa la dayac tiray ee 2003.
10. Masjid Sultan of Ternate
Masjid Sultan of Ternate waxa uu ku yaalaa meel 100 mitir u Kedaton Sultan of Ternate. Waxaa la dhisay tan iyo 1606dii lagu jiro boqornimadii Sultan Saidi Barakati, masaajidka lagu dhisay qaab-dhismeedka dhagax oo baahsan. Xabag waa isku dar ah oo geed jilif Kalumpang. Dhismaha caadiga ah masjidka sababtoo ah waxa ay ka kooban tahay afar geesood square in sameeyay qaabka uu u xirmi ah iyo tumpangnya kasta trellis Ahraamta ka buuxsantay 360 xabbadood xardhay sidii ay tirada maalmaha ee sannad AD jadwalka.
Meelaha ee gobolka Java
Places in Gobolka ee Java waxaa laga heli karaa magaalooyinka kala duwan iyo degmooyinka oo ay leeyihiin noocyo kala duwan oo soo jiita oo loo isticmaali karo sida meel u riyaaqayaa fasaxa qoyska ama xaaskaaga. Jasiiradda Java waa jasiirada ugu mudan ee Indonesia, cadaato in Java ayaa tiro ka mid ah dadka ugu badan oo densest adduunka, iyaga oo gaarey ilaa 136 milyan oo qof. Sababtoo ah jasiiradda mudnaanta ay deggan yihiin 60% dadka ka mid ah Indonesia, Java ayaa meelo dalxiiska sii kordheen.
Meelo dalxiiska ah ee Java gobolka ka jira ay si weyn loo Faafiyaan sababtoo ah isu Java waxa loo qaybiyaa laba meelo gaar ah, Capital Gobolka kuwaas Gaarka ah (DKI) ee Jakarta iyo Yogyakarta (DIY) oo ay leedahay afar gobol oo West Java, Central Java, Banten iyo Bariga Java. Iyadoo qeybo ka mid ah kuwan Lama yaabi doono haddii ee Java, wax badan oo ka mid ah meelaha loo isticmaali karo sida dalal safray.
Ayaa indhaha ku socda aagga of Java by meelaha gobolka iyo kuwa khaaska ah, oo ay ku jiraan:
Meelaha ee Java Dhexe
Dhismaha taariikhi ah Lawang Sewu in Semarang
Borobudur macbudka ku Magelang
Dalxiiska diinta ee Demak masaajidka Demak
Qabriga sunankiisa Muria Kudus
Kartini Beach ee Jepara
Biyo-dhac Lawe in Temanggung
Agrowisata Tanjungsari in Wonosobo
Mendut in Magelang
Taman Kyai waarta oo ku Magelang
Goa Jatijajar in Kebumen
Batu Raden in Banyumas
Bukit Dieng in Banjarnegara
Macbudka Lawang in Boyolali
Gurigii boqornimada ee Surakarta
Beero Shaaha Kemuning in Karanganyar
Sewu in Klaten
Taman Dayu in Sragen
Gajah Mungkur in Wonogiri
Xeebta Pecatu Guamanik in Jepara
Ambarawa Tareenka Museum ee Semarang
Balliyada Renjeng in Brebes
Xeebta Purwahamba in Tegal
Kedung Ombo in Grobogan
Biyaha Park Thistle in Pemalang
Marina Beach ee Semarang
Godka Manik in Jepara
Muuqaaladii Monument in Temanggung
Qubo Ocean Park ee Jepara
Suuqa Klewer in Surakarta
Berkadood Cacaban in Tegal
Xeebta Randusanga in Brebes
Meelaha Bariga Java
Buundada ugu dheer ee Surabaya
Xeebta Balekambang in Malang
Sarangan in Magetan
Mount Bromo in Probolinggo, Pasuruan iyo Lumajang
White Sand Beach ee Situbondo
Marine Dalxiiska Lamongan (WBL) ee Lamongan
Goa Akbar in Tuban
Museum Submarine in Surabaya
Kayd Karang Kates in Malang
Qabriga sunankiisa Giri in Gresik
Sunankiisa Bonang in Tuban
Beero Shaaha ee Wonosari
Baluran Park Qaranka ee Banyuwangi
Jatim Park 1 ee Malang
Bohol Ijen in Banyuwangi
Surabaya Zoo (KBS) ee Surabaya
Qubeyska biyaha kulul Songgoriti in Malang
Kayangan API ee Bojonegoro
Xeebta Slopeng in Sumenep
Xeebta Kenjeran in Surabaya
Cape xataa rahyo ku Lamongan
Xeebta Trigi in Psychology
Sunankiisa Ampel Surabaya
Meelaha ee West Java
Port boqoradda xeebta ee Sukabumi
Xeebta Pangandaran in Pangandaran
Mount Maras in Lembang, Bandung
Taman Bunga Nusantara ee Cianjur
Curug Cimahi in Cimahi
Bohol Puith in Bandung
AHN Botanisk Gardens ee AHN
Mekarsari in Cullinan AHN
Dam Wlahar in Karawang
Pantai Tanjung Pakis in Karawang
Curug Cigentis in Karawang
Jatiluhur in Purwakarta
Goa Japan ee Purwakarta
Cirata in Purwakarta
Mount Lock in Sumedang
Kaamerada Qubeyska Conggeang in Sumedang
Boom Biyaha ee Lippo Cikarang
Yaxaaskaan oo Indonesia Jaya ee Bekasi
Muara shoals xeebta ee Bekasi
Kulul dabbaasha ee Cipanas
Macbudka Cangkuang in Garut
Volcano in Garut
Gunung Gede ee Cianjur
Parks Madadaalada Mangkubumi in Tasikmalaya
Coral Coast tawulan in Tasikmalaya
Situ Gede ee Tasikmalaya
Qubeyska waxa kaamerada ee Subang
Capolaga Adventure ee Subang
Komodo Island ee Indramayu
Meelaha of Interest in Banten
Of National Parks Ujung Kulon
Great Masjidka Banten
Meelaha ee Capital Gobolka Gaarka ah (DKI) Jakarta ee
Ocean Park Biyaha Adventure
Reptile Jannooyin iyo Museum Komodo
Dhalinyarada Ballan Museum
Chinese Indonesian Cultural Park
Duur-joogta Bird ama Bird Park
Meelaha in Yogyakarta (DIY)
Macbudka Prambanan in Sleman
Parang Tritis in Bantul
Waxaa barakaysan Loka Zoo ee JL. Botanisk 2
Taman Pintar Yogyakarta on JL. Panembahan Senopati 1-3
Gethuk Niagara Sri in Playen Gunung
Goa Design Kencono in Gunung
Kaliurang in Sleman Pakem
Museum Kekayon in Wonosari
Malioboro in JL. Malioboro
Taman Sari in Bannerman Harjo
Qarsoodi Goa in Bantul
Warungboto in JL. Halyeeyga
Yogyakarta Palace ee JL. Rotowijayan
Beringharjo in JL. A. Yani
South Square Yogyakarta ee JL. South Square
Waxaa ka mid ah soo jiidashada badan ee deegaanka ee Java waxaa laga yaabaa in ka mid ah liiska kor ku xusan waxay noqon kartaa macluumaadka aad u raba inuu u safro ee Java iyo degaanka ku hareereysan. Haddii aadan ku qanacsanayn ama ay mar uun soo booqday baraha dalxiis ee ugu sareysa, waxaad isku dayi kartaa in ay u safraan meelo kale.
Meelaha jasiiradda of Sulawesi
Meelaha jasiiradda of Sulawesi, dad badan ayaa kala kulantay gobol walba oo ka mid ah jasiiradda ay ka mid yihiin South Sulawesi, North Sulawesi, Koonfur Sulawesi iyo West Sulawesi. Laga soo bilaabo gobollada qaar ee Sulawesi hubaal waa in isagoo noocyo kala duwan ah indhaha iyo sifooyinka in ay yihiin xaqiiqo ah oo kala duwan oo ka soo muuqaal, beeraha, xeebaha, Wabiyaal, bad, iwm Haddii aad tahay jasiiradda Borneo ha iloobin in sidoo kale ay joojiyaan by jasiiradda jasiiradda Sulawesi, Sulawesi isu sababta oo ah waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa gasiiradaha Borneo, sidoo kale si aan ka fogayn in ay qaataan safarka. Haddii aad jeceshahay inaad safar u soo uraya dabiiciga ah, jasiiradda tani waa qumman yahay booqasho. Indeed, marka laga soo tago soo jiidashada dabiiciga ah dad kale oo badan, laakiin waxa ay u muuqataa nooca badan yihiin. Haddii aad rabto in aad soo booqato Sulawesi, malaha hoos liiska meelo dalxiiska noqon kartaa halka uu aad u socoto safarka halka Indonesia.
Liiska Places in Sulawesi By Gobolka
- Places ee South Sulawesi
Xeebta Tanjung Bira in Bulukumba
Losari in Makasar
Museum Balla Lompoa in Gowa
Somba OPU in Gowa
Niagara Banti Murung in Maros
Tashti ama Lake ee Wajo
Pantai Tanjung palette ee Regency Bone
Xidheenka Bili-Bili in Gowa
Xeebta Bone qabsi degmada Luwu
Jasiiradda Kamarrang in Pinrang
Jirridda Island Lampe in Sinjai
Gabiga Londa ee Tana Toraja
Karaenta Nature Reserve in Maros
Xeebta Lalombo in Luwu
Rajaynaynaa Island ee Jeneponto
Xeebta Marina Korong Stone Bantaeng
Xeebta Tanakeke in Bantaeng
Kaamerada Qubeyska Kalompie in Barru
Jasiiradda Kadingare in Sinjai
Nature Qubeyska Ompo in Soppeng
Jasiiradda Selayar in Takalar
Buuraha dhagax Tumonga in Tanatoraja Degmada
Goa Liang Andolan in Luwu
Oogada Malino in Gowa
Marine Park Mallusetasi in Barru
- Places ee North Sulawesi
Sinaden jasiiradda in Manado
Xeebta Lakban in Minahasa
Tangkoko Park Qaranka ee Batu Putih North Bitung
Volcano quuska Mahangetang in Sangihe
Lihaga Island ee North Minahasa
Linow in Manado
Bunaken Island ee Bay ee Manado
Salaadda kur Tomohon in Manado
Hill Love Kanonang in Minahasa
Klabat in Minahasa
Xeebta Kora-Kora in Minahasa
Lake Tondano in Tomohon
Xeebta Likupang in Minahasa
Pulau Lembeh in Bitung
Mahawu in Tomohon
- Meelaha of Interest ee koonfur Sulawesi
Xeebta Nirwana in Bau-Bau
Wakatobi Park Qaranka ee Wakatobi
Niagara Moramo in Konawe East
Nambo Beach ee Kendari
Liwutongkidi in Buton Island
Buton Fortress in Buton
Niagara Lahundape in Kendari
Jasiiradda Sagori in Bombana
Xeebta Toropina in Konawe
Shukaansi Beach ee Wakatobi
Kaamerada Qubeyska Mongolo in Kolaka
Goa Liang La Kalombo in Muna
Cluster jasiiradda Basilica ee Buton
Tanjung Bunga in Bombana
Teluk Kendari in Kendari
Balli ku Socda Kendari
Goa Dabiiciga ah ee Wakatobi
Jasiiradda Malangke in Bombana
Tanjung Boti Kolo ee South Konawe
Xeebta Kancinaa in Buton
Tanjung Wood Wind in Kolaka
Xeebta Meleura in Muna
Aqado ee North Konawe
Xeebaha cape Sapiri ee North Kolaka
Napier Island ee Bau-Bau
Niagara Sangkona in Bombana
- Places in West Sulawesi
Xeebta Palipis in Polewali
Xeebta Dato in Majene
Xeebta Manakarra in Mamuju
Niagara Indo Rannuang in Polewali
Niagara Limbong Kamandang in Polewali
Sekka dam-Sekka in Polewali
Niagara Sambabo in Mamasa
Xeebta Mampie in Polewali
Xeebta Bahari in Polewali
Waxaa ka mid ah soo jiidashada badan ee Sulawesi jirsado dalxiiska xeebta kubada inteeda badan heysteen qaybaha kala duwan ee gobolka jasiiradda. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadka kor ku xusan waxaa lagu Waxyoon kara safarka jasiiradda halka Sulawesi
Places in Gobolka Island Sumatra
Soo jiidashada dalxiiska ee Sumatra waa goob dalxiis oo soo jiidatay dareenka dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeye ah. Haddii aad xiisaynayso in booqday jasiiradda Sumatra, dabcan waxaad ka heli doontaa meelo dalxiiska badan oo ka jira degaanka ee jasiiradda, sida jasiiradda Sumatra waa mid aad u baaxad weyn oo waa jasiiradda 6aad ee ugu weyn dunida oo dhan, waa layaabna ma leh ogaannay in gasiiraddaas la heysta baro dalxiis badan oo loo isticmaali karo sidii goob dalxiis ee fasaxa ah ama in ay waqtiga firaaqada ah.
Soo jiidashada dalxiiska gobolka ee jasiiradda Sumatra waxaa laga heli karaa magaalooyinka iyo gobollo badan oo kala duwan, sababtoo ah jasiiradaha ee Indonesia dhab u qaybsan yahay mid ka mid ah gobolladii oo dhibic West Sumatra (West Sumatra), South Sumatra (South Sumatra), North Sumatra (North Sumatra ), Jambi, Lampung, Riau, Bengkulu, Aceh iyo Riau. Dabcan waxaa jira gobollo leeyihiin qaar ka mid ah indhaha ku kala duwan, sida:
Meelaha ee West Sumatra
Sianok Canyon ee Bukittinggi kab.Agam
Sikuai in Padang
Anai Valley Nature Reserve in Tanah Datar
Biyo-dhac Valley Harau in Harau KAB. Konton Koto
Madaxtooyada Pagaruyung in Tanah Datar
Lakes Twin in Solok
Lake House ee Agam
Lake Batur ee degmada. Solok iyo KAB. Flatland
Langkisau kur Painan City - South Coast
Jasiiradda Cubadak in Padang
Panorama Tabek jabay Padang
Root Bridge ee Padang
Power Tri Eka Dharma Museum ee New York City
Xeebta Gandoriah in Kota Pariaman
Meelaha of Interest ee South Sumatra
Manna River ee Lahat
Niagara Bedegung degmada miyiga Bedegung. Tanjung Agung
Macbudka Bumi Ayu in tuulada degmada Britishka. Tanah Abang Sumsel
Buundada Ampera in Palembang
Biyo-dhac Angel in Lahat
Niagara Temam in Lubuk Linggau
Ciidanka Booliisku Park boqortooyada ee Sriwijaya in Palembang
Bohol Tekurep in Palembang
Oogada Pasema in Lahat
Jasiiradda Kemaro in Palembang
Kur Siguntang in Palembang
Negri Museum ee Palembang ee Gobolka South Sumatra
Goa Putri in Oku
Mount Serelo in Lahat
Niagara Lematang in Palembang
Zoo Rebang Kemambang in Lahat
Hot Cape Jidka ku Lahat
Mount Dempo in Bengkulu
Meelaha of Interest ee North Sumatra
Lake Toba in Medaan
Magaalada Green Hill ee Medaan
Sipiso-piso in Karo
Gudubno Siombak in Medaan Marelan
Gundaling buuraha leh ee Medaan
Biyo-dhac Laba Colors Deli Serdang
Bukit Lawang in Langkat
Mount Sibayak in Karo
Xeebta Lagundri ee South Nias
Xeebta Sorake on Nias
Maimun Palace ee Medaan
Linting u gudubno in Medaan
Meelaha of Interest in Jambi
Kaamerada Qubeyska Semurup
Qoyska Citra Indah Park
Biyo-dhac Telun Berasap
Park manganese Mangurai
Meelaha of Interest in Lampung
Dalxiiska Park Green Valley
Socda kampoeng Tabek Beautiful
Ciidanka Booliisku Park Pugung Raharjo
Jidka Kambas National Park
Qoolley maxaabiis ahaan Muara Tembulih
Meelaha jasiiradaha Riau ah
Meelaha ee Aceh
Niagara Blang Dabaasha
Kuala xeebaha Parek
Taxadiri Islamic boqortooyada Peureulak
River aqado Teunom
Meelaha in Bengkulu
Museum Gobolka Bengkulu Negri
Duayu xeebta Sekundang
Haaruum gudubno Bastari
Niagara oo ah madaxa siring
Xeebta Padri ku tuman
Meelaha of Interest in Riau
Taasi Goobaha macluumaadka ee Gobolka Sumatra Island ee gobolka, meelo dalxiiska meelaha dalxiiska ugu badan yihiin dalxiisayaal.
Posted by needsjobslowongankerja at 11:20 AM